Soomaali | The Global COVID Guide
Habari za COVID huko Soomaali
Raadi tallaal aniga agtayda ah
Cudurka caalamiga ah COVID-19
COVID-19 iyo sida uu isku faafiyo
Tallaabooyinka ka hortagga ah
Dr. Mohamed Hagi Aden ayaa sharaxa COVID-19 iyo tallaalkiisa
Raadi qoraalka waraysiga halkan
Meel kasta oo waddanka dhexdiisa ah halkan.
Haddii aad joogtid Minnesota karadso, halkan.
Ka fiiri fiidiyowgan Sahan Journal oo ku saabsan sida aad isaga tallaali karto.
COVID-19 waa masiibo caalami ah oo bilaabatay Janaayo sanadka 2020 waxayna taabatay nolol kasta oo ka jirta meerahan dhinac ama qaab kale. Aan wax ka barano.
Malaayiin daafaha adduunka ah ayuu ku dhacay cudurka malaayiinna si murugo leh ayey ugu dhinteen cudurkaan. Khariidadda tooska ah ee la soo sheegay ee kiisaska COVID-19 iyo dhimashada
COVID-19 waa cudur uu sababo cudurka faafa ee loo yaqaan 'Coronavirus' (SARS-CoV-2), oo ah fayras si fudud ugu faafa siyaabo kala duwan:
Hawada: Qufac, hindhiso, hadal, neefsasho xoog leh.
Taabasho: Taabashada qof cudurka qaba ama isku dusha sare ee qofka cudurka leh ka dibna taabasho afkaaga, sankaaga, ama indhahaaga.
Sida caadiga ah, u dhowaanshaha dadka kale ee aan lahayn waji-shareer waxay si weyn u kordhineysaa halista faafitaanka Coronavirus iyo inaad ku xanuunsato COVID-19.
Muruq ama jidh xanuun
Dhimaan cusub ama dhadhan la'aan
Ciriiri ama sanka oo dareera
Haddii qof uu iskahelo Calaamadahan daran, CDC waxay kugula talineysaa inaad si dhakhso leh u raadsato daryeel caafimaad oo degdeg ah:
Neefsashada oo dhibato kuleedihid
Xanuun joogto ah ama laabta cadaadis ka dareem
Awood la'aanta in la soo tooso ama la soo jeedo
Bishimaha ama wajiga bluug isku tabadal , oo tilmaamaya heerka Oxygen ee dhiigga inu hooseeya
Dadka halista sare ugu jira dhibaatooyinka daran:
Dhibaatooyinka sambabka iyo neefta
Wadne xanuun, sonkorow, iyo cayil
Kansarka iyo xanuunada dhiigga qaarkood
Difaaca jirka oo daciifa
Cudurka kelyaha ama beerka ee joogtada ah
Xiro maaskaro. ka raadi macluumaad dheeri ah oo ku saabsan noocyada waji-shareerka iyo habka saxda ah ee loo xirto Halkan
Ka ilaali ugu yaraan 6 fuudh masaafada dadka kale
Dhaq gacmahaaga ama nadiifi gacmaha.
Nadiifi oo jeermiska ka tirtir dusha iyo walxaha ay kuwa kale taabteen
Seddex tallaal ayaa loo fasaxay in laga isticmaalo Mareykanka laga bilaabo maanta:
95% waxay waxtar u leedahay kahortaga COVID-19 cudur, isbitaal dhigis iyo geeri.
Wax ku ool ah oo ka soo horjeeda noocyada cusub / isbeddelay ee COVID-19 (Koonfur Afrika, Ingiriiska iyo Brazil).
Waxay ka hortagtaa gudbinta fayraska.
Laba irbadood (oo laga toogtay gacanta) 3 usbuuc oo u dhexeysa
Waxaa loo oggolaaday shaqsiyaadka jira 12 sano iyo wixii ka weyn
Tallaalka mRNA (gabal ka mid ah COVID-19 fayraska RNA oo leh tilmaamo ah in la sameeyo oo keliya borotiinnada soo kordha, oo lagu rido daahan dufan oo aan dhib lahayn).
Waxay u egtahay inaad ku badbaadi karto uurka iyo intaad naas nuujin karayso. Haddii hooyadu tallaasho, ilmaha waxaa ilaaliya unugyada difaaca jirka.
In lagu hayo -80'C (heerkul aad u qabow).
Dhibaatooyinka ay keento: Xanuun yar oo dhex-dhexaad ah, maqaarka oo casaada, iyo barar goobta la muday, madax xanuun. Fursad fog oo ah xasaasiyad daran.
Laba irbadood (oo laga toogtay gacanta) 4 usbuuc oo isku dhexeysa
Waxaa loo oggolaaday shaqsiyaadka 18 sano iyo wixii ka weyn
Waxaa lagu kaydiyaa -20’C (heerkul aad u qabow).
Tallaalka Johnson & Johnson:
85% waxay waxtar u leedahay kahortaga cudurada halista ah ee COVID-19, isbitaalada iyo geerida. Wax ku ool ah oo ka dhan ah noocyada cusub / isbeddelay ee COVID-19 (Koonfur Afrika, Ingiriiska iyo Brazil)
An loo sixiyay 18 sano iyo wixii ka weyn
Tallaalka Viral Vector
Waxaa lagu kaydiyaa heerkulka qaboojiyaha 36 ° F ilaa 46 ° F (yaali karo 3 bilood).
Dhibaatooyinka soo raaca: Badanaa waa kuwo fudud oo waxaa ka mid ah xanuun, maqaarka oo casaan noqda, iyo barar goobta la muday, madax xanuun, daal aad u badan, muruq xanuun, lallabbo, qandho. Fursad fog oo ah xasaasiyad daran.
Macluumaadka hoose wuxuu ka yimid CDC.
Laba nooc oo tijabitaan ayaa loo heli karaa COVID-19: baadhitaannada fayraska iyo baadhitaannada unugyada difaaca jirka.
Tijaabada fayrasku waxay kuu sheegaysaa haddii aad qabto infekshin hadda jira.
Baaritaanka antibody wuxuu kuu sheegi karaa haddii aad jeermis hore qabay.
Yey tahay in la baaro:
Dadka leh calaamadaha COVID-19.
Dadka xiriir dhow la yeeshay (6 fuudh wadar ahaan 15 daqiiqo ama ka badan) qof qaba COVID-19 la xaqiijiyey.
Dadka kaqeyb qaatay waxqabadyada iyaga halista sare ugu jira COVID-19 maxaa yeelay bulsho ahaan kama fogaan karaan sida loogu baahdo, sida safarka, kaqeybgalka shirarka bulsheed ama kuwa ballaaran, ama joogida goobaha gudaha ee cidiidiga ah.
Dadka la weydiiyay ama loo gudbiyay inay baaritaan ka helaan daryeel caafimaad bixiyahooda, waaxda caafimaadka deegaanka ama gobolka.
Sida laysku soo baaro:
Waxaad booqan kartaa websaydhka waaxda caafimaadka ee gobolkaaga ama deegaankaaga si aad u raadiso macluumaadkii ugu dambeeyay ee deegaanka ee ku saabsan baaritaanka.
Haddii aad leedahay calaamadaha COVID-19 oo aad rabto inaad iska baarto, wac daryeel caafimaad bixiyahaaga marka hore.
Haddii aad isku aragto wax wanaagsan, ogow talaabooyinka difaaca ee aad qaadi karto si aad uga hortagto kuwa kale inay bukoodaan.
Haddii aad iska aragto wax taban, waxaad u badan tahay inaadan cudurka qabin markii lagaa qaadayay saamiga lagaa qaaday. Natiijada baaritaanka waxay kaliya ka dhigan tahay inaadan haysan COVID-19 waqtiga baaritaanka. Sii wad inaad qaado tillaabooyinka aad ku difaaci leheed naftaada.